Xulka Dagmadda Qardho Oo Gaaraacay Kan Daaralasaam+Sawirro. – SBC
Xulka Dagmadda Qardho Oo Gaaraacay Kan Daaralasaam+Sawirro.
Posted by SBC Editor on May 28, 2015 Comments
Magaalada Daaralasaam ee xarunta dalka Tanzania waxaa si rasmi ah ugu furmay tartanka magaalooyinka bartamaha Afrika ee kubadda Kolayga,kaaso lugu magacaabo Inter City Game.
Xulka Degmado Qardho oo ah magaalada kaliya ee ka socota Puntland ayaa ciyaartii ugu horreeysay la yeelatay magaalada martida loo yahay ee Daaralasaam,waxaana ciyaar adag oo dhex martay labada magaalo guul muhiim ah gaaray magaalada Qardho.
Qardha ayaa guusho waxay ku raacday 85-gool,halka caasimada Daaralasaam ay heshay 76-gool,waxaana guusha muhiimka ah gaaray degmada Qardho oo ka socotay Puntland.
Hoggaamiyaha kooxda kubadda kolayga ee degmada Qardho,Cabdirashiid Xasan Xirsi ( Baki ) ayaa ku tilmaamay guusha ay gareen in ay tahay mid Soomaaliya oo dhaan guul u ah aysaan aheen Qardho oo Puntland ka socota.
Baki oo warbahinta caalamiga ah la hadlay markii ay ciyaarta soo dhammaatay waxuu sheegay in ay rajeenaya in ay guul muhiim ah gaaran ciyaaraha soo socda.
Dadweyne badan oo Soomaali ah ayaa ciyaarta ka qayb-galay kuwaaso si weyn u taageerayay degmada Qardho oo guul ay ku raaxeysatay ka gaartay magaalada caasimada u ah dalka Tanzania,halka oo sannadkan lugu qabtay tartanka.
Sidoo kale,war ka soo baxay maamulka ciyaara kubadda Kolayga ee magaalooyinka bartamaha Afrika ku yaalla ayaa lugu sheegay inau si weyn ugu farxeen ayna ku qanacsan-yihiin qaabkii wanagsana ee aqlaaqdu ku dheehneyd oo ay ku ciyaareen ciyaartooydii ka socotay degmada Qardho oo xarun u ah gobolka Karkaar ee Puntland.
Eng Bana Cali oo ah madaxa suuqgeenta tartanka kubadda Koleyga ee magaalooyinka bariga iyo bartamaha Afrika ayaa dhankiisa sheegay tartankan inuu ka culusyahay kuwii horay u dhacay oo ay ka qayb-galayaan magaalooyin ka socda waddamada bartamaha ku yaalla.
Sanadkii hore waxaa tartankan ka qayb-galay magaalada caasimada ah ee Garoowe, taaso ciyaarta kama dambeysta ah soo gaartay,waxaana si dirqi ah koobka uga qaaday koox ka socotay dalka Masar oo ku ciyaaraysa magaca caasimada Qaahira, sanadkan ayaa rajo weyn laga qaba tartankan inay guul ka gaarto Xulka degmada Qardho Ee Xarunta Gobolka Kar-Kaar.
Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa koox madatalaysa iyana ay ka qayb-galaysa tartanka,waxaana dalkeena oo dhan matalaya Muqdisho iyo Qardho.